Gobollada Soomaaliya tan iyo Xoriyaddii 1960 – SomaliaOne News Network
Gobollada Soomaaliya tan iyo Xoriyaddii 1960
Oct 25, 2016 Hussein Nur QORMO 0 1601 Views By Hussein Nur
18 Gobol ee dalka Soomaaliya.
– Soomaaliya markii ay xornimada qaadatay ee ay Midoobeen Gobolladii uu Ingiriisku gumeystay iyo kuwii ay Qarammada Midoobay gaarsiisay xornimada ka dib sanado badan oo gurmeysi Talyaani iyo Ingiriis ay isu bedeleen, waxay noqotay Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Waxay ka koobnay siddeed Gobol.
1- Gobolka Woqooyi Galbeed oo xaruntiisu ay tahay Hargeysa, ayna ka mid ahaayeen magaalooyinka Berbera ilaa Boorame iyo Zeylac.
2- Togdheer oo ay xarunteedu tahay Burco, ayna ku jireen inta ka soo hartay Somaliland oo ay ka mid yihiin Laas Caanood iyo Ceerigaabo.
3- Gobolka Bari oo ay xaruntiisu tahay Boosaaso.
4- Mudug waxaa laga xukumayay Gaalkacyo, waxaana hoos tegayay ilaa Guriceel, Ceel Buur iyo Ceel-Dheer.
5- Hiiraan oo ah sida ay hadda weli tahay.
6- Banaadir oo xaruntu ay tahay Muqdisho ayna ka mid ahaayeen Marka, Wanlaweyn iyo Jowhar.
7- Jubbada Sare oo ay xarunteedu aheyd Beydhaba, ayna ku jireen Gobollada hadda loo yaqaan Bay, Bakool iyo Gedo.
8 – Jubbada Hoose, oo ah labada Jubba ee hadda jira xarunteeduna ay aheyd Kismaayo.
Kacaanka militeriga ee talada dalka la wareegay 21-kii October 1969, wuxuu dalka u bixiyay Jamhuriyadda Dimuqraaddiga ee Soomaaliya. Wuxuuna xilliyo kala duwan sameeyay 10 Gobol oo hor leh oo laga jaray 8-dii Gobol ee hore u jiray.
Waxa ayna kala ahaayeen :
1- Awdal oo ay xaruntiisu noqotay Baki.
2- Sool oo ay xarunteedu tahay Laas Caanood.
3- Sanaag oo ah Ceerigaabo.
4- Nugaal oo Garowe ah.
5- Galguduud oo ay xarunteedu tahay Dhuusamareeb.
6- Shabeellaha Dhexe oo laga xukumo Jowhar.
7 – Shabeellaha Hoose oo Marka laga maamulo.
8- Bakool oo xarunteedu ay tahay Xudur.
9- Gedo oo Garbahaarrey ay xuddun u tahay.
10- Jubbada Dhexe oo Bu’aale ay saldhig u tahay.
Waxaad ka dheehan kartaa doodda laga guuleystay ee salka ku haysay in aan Marka hoos tegi karin Beydhaba maaddaama ay hore uga tirsanaan jirtay Banaadir.
Waxaad arkeydaa doodda kale ee iyana laga adkaaday ee ahayd in Gedo ay tahay in ay hoos timaado Beydhaba, labada Jubbana ay isku ahaadaan hal Dowlad Goboleed.
18 gobol ee Soomaaliya, Gobollada Soomaaliya, Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Jamhuuriyadda Soomaaliya
Kacaanka nooli keyd ha reebo Hadal Macaan ::: Hinaaso Haween
Murtidan waxa ay maskaxdiisu ka maaxatay: Ali Abdi Ali Hoshow Twitter : @AliHoshow Email : alihoshow@gmail.com Waxa ay ku bilaabatay...